January 15, 2021 - Achawlaymyar
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
January 15, 2021 by Achawlaymyar
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ ပျိုမေတို့အနေနဲအတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေမဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေ တတ်ပါတယ်။ tခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့အပြင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်;လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေမှာပါနော် (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်” လတျဆတျတဲ့ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ တံတောငျဆဈ၊ ဒူးခေါငျး နဲ့ ပေါငျခွံတှအေပွငျ တခွားမဲနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေားလုံးကို လိမျးပေးနိုငျပါတယျ။ လိမျးပေးပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မိနဈ ၂၀ လောကျထားပွီး ရနှေေးလေးနဲ့ ပွနျလညျဆေးကွောပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ထူးခွားတဲ့ အာနိသငျကို ခကျြခငျြးတှေ့မွငျရမှာပါ …။ (၂) ဒိန်ချဉ်” ဒိနျခဉျြအသနျ့ကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပျိုငျးတှကေို လိမျးပေးပွီး ၁၅ မိနဈလောကျထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးကွောပေးလိုကျ ရုံပါပဲ …။ … Read more
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် မရှိရင် ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ်… Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျား ပီသတယ် ထင်နေ လားဆေးလိပ်/ အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား..? ဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား ?နောက်ဆုံးစစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား? တစ်ကယ် တမ်းတော့ ယောက်ျားပီသဖို့ သူများသားသမီးကိုမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် … Read more
မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိမရှိ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ…
အပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ သင်မြင်တဲ့စုံတွဲကိုရွေးပါ….သင့်အချစ်ရေးကိုမှန်အောင်ပြောပြမယ်… ခုပြထားတဲ့ ပုံလေးသုံးပုံမှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးကနေတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ အဖြေတွေကိုတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်။ ပုံ (၁) ကို ရွေးခဲ့ရရင် ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သင့်အချစ်ရေးကတော့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။ သင့်ချစ်သူနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ သင့်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Social Media တွေပေါ်မှာ လူသိရှင်ကြားချပြနေစရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိသူပါ။ သင်ဟာ Social Media ပေါ်မှာ လူအများရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို ရဖို့ထက် လက်တွေ့ဘဝမှာ လက်တွေ့ကျကျ ချစ်ရတာကိုပဲ နှစ်သက်သူပါ။ ပုံ (၂) ကို ရွေးခဲ့ရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြတတ်ပါတယ်။ သင့်ခံစားချက်ကို ဘယ်သူ့ကိုမဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြတတ်သူပါ။ သင်သိထားရမှာက သင့်ချစ်သူဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ သင်တို့ပြဿနာ အဝဝကို သူများကိုပြောပြနေစရာမလိုပါဘူး။ … Read more
ဒီ (၁၆) ချက်ကိုအလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါ…
ဘ၀မှာ လေ့ လာ ပြီး မှတ်သား ထား သင့် သော စကားလုံးများ…. ၁ ။ ကိုယ့် မျက် စိ နဲ့ သေသေ ချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ပါးစပ် နဲ့ အလျင်စလို သက်သေ မပြချင်ပါနဲ့ …။ ၂ ။ ကိုယ် မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုက်ရိုက် ဖြေဆို လိုက်တာ အပေါ့ ပါး ဆုံးပါ …။ ၃ ။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကျောက်ခဲ နဲ့ ပေါက်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ ပြန်မပေါက်နဲ့ တော့၊ အုပ်မြစ် တည်ဖို့ … Read more
မိန်းကလေး တွေ ချစ်သူ ကောင်လေး ကို ခေါ်ဝေါ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အချစ် ၊စိတ်နေသဘောထားကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ကဲ ကိုယ့် ကောင်မလေး က ဘယ်လိုလဲဆိုတာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်… “ကိုကို” လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး တွေဆိုတာ သူတို့လေးတွေက ချစ်စရာ တအားကောင်းပြီး ကလေးဆန် ပါတယ်။ ဖြူစင် ရိုးသား တဲ့စိတ်ကလေးပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့် ချစ်သူ အပေါ် ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နဲ့ ချွဲနွဲ့တတ်တဲ့သူတွေပါ။ဒါအပြင် သူဟာ သင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု တွေအပြည့်နဲ့ ချစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့styleကတော့ လူငယ် ဆန်ဆန်လေးနဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သနားကြင်နာ တတ်တဲ့သူဖြစ်တာနဲ့အညီ သူတို့ရဲ့နှလုံးသား ဟာ နူးညံ့တဲ့အတွက် အထိခိုက်လွယ်တာကြောင့် သင်အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အသေးအဖွဲ လေးကအစ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး သင့်ကြောင့် သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင် … Read more
အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအကြောင်း
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်. တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ ရစ်တတ်ကြပေမဲ့ အနစ်အနာအရမ်းခံတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းများက အရမ်း ခင်မင်နေကြပါတယ် တခါ တစ်ခါ ရုပ်တည်နဲ့ဆေးထိုးတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ လူတွေ ရှေ့မှာ တည်တည်တံ့တံ့ နေထိုင်တတ်ကြပေမဲ့ တကယ်ခင်မင်သူများနဲ့ ဆိုရင် ရယ်မော ပြုံးပျော်စွာ နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ခံစားရတာလည်း အရမ်းလွယ်သလို၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ အရမ်းမြန်တဲ့သူတွေပါ၊ ငိုလိုက်ရယ်လိုက်နဲ့ စိတ်ဆိုးလွယ်သလို စိတ်ပြေလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာ။ခု စိတ်ညစ်နေတယ် ခဏနေ ဟန်ဆောင်ပြီတော့ ပျော်ရွှင်နေသလို နေပြတတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဟာ ငယ်စဉ်ထဲက … Read more
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ….
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း မေတ္တာပို့နည်း သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ .. သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ .. (ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ) အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲကဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် .. ကိုယ်ပြောတဲ့စကား အောင်စေပါတယ် .. သွားတိုက်ပြီးလို့ ရေကို ထပ်ကိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပထမဆုံး – မိမိကိုယ်မိမိဆုတောင်းပါ – ဤရေ အေးမြသလို အကျွနိုပ်လည်းအေးမြပါစေ) … Read more
မိန်းကလေး တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အမှန်တရားတွေများလား
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြတယ်။ ယောက်ျားမှာ စုထားတဲ့ငွေ သိန်း ၂၅ဝရှိတယ်၊ မိန်းမမှာက သိန်း ၂ဝဝရှိတယ်။ (ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအဖြစ် ရေးပါတယ်) မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ယောက်ျားရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အိမ်ခန်းတစ်ခန်း အရစ်ကျဝယ်လိုက်တယ်၊ မိန်းမရဲ့ပိုက်ဆံကို အိမ်အပြင်အဆင် အသုံးအဆောင်တွေအတွက် သုံးလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက် ယောက်ျားက သူရတဲ့လခထဲကနေ လစဉ်အိမ်ခန်းခအရစ်ကျဆပ်တယ်၊ကျန်ငွေကိုစုတယ်။ မိန်းမက သူရတဲ့လခနဲ့ နေအိမ် စားဝတ်နေရေးအတွက်သုံးတယ်၊ ကျန်တာကိုစုတယ်။ ၃နှစ်လွန်တော့ မိန်းမ မှာကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်၊ ကလေးမွေးချိန်မှာယောက်ျားရာထူးတိုးတယ်၊ လခလည်းတိုးသွားတယ်။ကလေးကိုပြုစုဖို့ လူလိုလာတယ်။ ကလေးထိန်းခေါ်ရင် ပိုက်ဆံပေးရမယ့်အတူတူ နှစ်ယောက်လုံး သေချာတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မိန်းမကအလုပ်ထွက်ပြီး ကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မိန်းမဟာ ကလေးနဲ့ယောက်ျားကိုပြုစုတဲ့ အိမ်ရှင်မလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်။၁ဝနှစ်အကြာမှာ ယောက်ျားက ရာထူးတိုးသထက်တိုးပြီး အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မိန်းမက နေ့တိုင်း ကလေး၊ ယောက်ျား၊ အိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပဲ ပတ်ချာလည်နေခဲ့ပြီး … Read more
💓တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြတာ👉သောကြာ😃 💓ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာအပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက်သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီးပူပန်ပေးတတ်တာ👉သောကြာ😃😃 💓ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓ဖြစ်လာသမျှအရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတတ်လေ့ရှိတာ👉သောကြာ😃 💓အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိရတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သိပ်မတွေးပဲ အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓မသိတဲ့သူတွေနဲ့ဆို ရေခဲတုံးလို့ အရမ်းအေးပီး အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာဆို စက်သေနပ်ပစ်သလို မနားတမ်း လေပစ်တာ👉သောကြာ😃 💓သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူ့မှ ရင်ဖွင့်လေ့မရှိပဲ တျောက်ထဲ ရင်ထဲမှာအမြဲ သိမ်းထားတာ👉သောကြာ😃 💓လျက်ဝှက်တဲ့ နေရာမှာဆို ဘယ်နေ့နံနဲ့မှ မတူအောင် အရမ်းတော်လွန်းတာ👉သောကြာ😃 💓ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က ဆရာကြီးမလုပ်ချင်သလို ကိုယ့်အပေါ် သူများဆရာကြီးလာလုပ်ရင်လည်း အသေမုန်းတာ👉သောကြာ😃 Credit- 💥သွေးသစ် Unicode, သောကွာသားသမီးတှရေဲ့ သိကောငျးစရာ( … Read more